कर्जादाताले के गर्नु पर्छ? वित्तीय लिङ्कमा परिभाषा
सुरु ऋण wiki Mietschuldner
के हो Mietschuldner: तपाईंले सबै पट्टे बारे जान्न आवश्यक सबै कुरा
जर्मनीमा बढि अधिक व्यक्तिहरू अधिकृत छन्। आफैमा ऋण तपाईंको जीवनशैलीको लागि खतरा छैन, तर यदि तपाइँ भाडा तिर्न पर्दछ भने, तपाइँ आफ्नो घर गुमाउन र बेघर हुन सक्नुहुन्छ। एक भाडादार देनदारको रूपमा, आज एक नयाँ पट्टि प्रवेश गर्न पनि धेरै गाह्रो छ। यस कारणको लागि, भाडा देनदारहरू सबै खरिदहरूमा टाढा पर्दछ। तपाईले ऋण पट्टि गर्नु पर्छ, तपाईलाई चाँडो कार्य गर्नु पर्छ, किनकि पर्खाइमा मात्र तपाईको स्थिति बढाउनु पर्छ।
1 भाडा भुक्तान गरिएको छैन? कुन अवधिबाट तपाईलाई पट्टे देनदार मानिन्छ:
1.1 भाडाको लागत के हो?
2 के मकान मालिक बिना सूचना बिना पट्टि बन्द गर्न सक्छ?
2.1 यदि तपाईं भाडामा दुई महिनाको भाडामा हुनुहुन्छ भने, यो तपाईंको लागि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ
3 त्यसोभए तपाईलाई पट्टेदार देनदारको रूपमा प्रतिक्रिया दिनुपर्छ:
4 रद्द रद्द गर्न:
5 सम्बन्धित लिङ्कहरू:
भाडा भुक्तान गरिएको छैन? कुन अवधिबाट तपाईलाई पट्टे देनदार मानिन्छ:
1.9.2001 पट्टे सम्झौताको लागी प्रवेशको साथ, भाडामा एक महिनाको तेस्रो कार्य दिन अग्रिम भुक्तानी गर्न अनिवार्य छ। यदि तपाईं यस म्यादलाई भेट्न असफल हुनुभयो भने, तपाइँ पहिले नै कानुनी रूपमा भाडादार देनदारको रूपमा कार्य गर्न बाध्य छ। यद्यपि, तेस्रो कार्य दिवसमा अग्रिम भुक्तानी भाडामा सम्झौतामा लेखिएको रेकर्ड हुनुपर्छ। साथै, यदि तपाईंले मात्र मासिक म्यादमा भाडाको भाग तिर्नुभयो भने, तपाईं आफ्नो मालिकको साथ गल्ति हुनुहुन्छ।
भाडाको लागत के हो?
यो पर्याप्त देखि टाढा छ यदि तपाई केवल भाडा सम्झौताको भाडा तिर्नुहोस्, किनकि भाडामा अपरेटिङ भुक्तानीको लागि अपशिष्ट निपटान र पानीको आपूर्तिका लागि अग्रिम भुक्तानीहरू समावेश छन्। तपाइँले तपाइँको मासिक भाडाको साथ तापनि लागत वा एक सहमत फ्लैट दरको लागि अग्रिम भुक्तानलाई पनि सुधार्न पनि पर्छ। यदि तपाईं भाडामा भाडा तिर्न सक्नुहुन्न भने, तपाइँ कानूनी रूपमा पनि पट्टे देनदार हुनुहुन्छ।
के मकान मालिक बिना सूचना बिना पट्टि बन्द गर्न सक्छ?
यदि तपाईं मासिक भाडामा मात्र पूर्वनिर्धारित हुनुहुन्छ भने, तपाइँ अझै तत्काल समाप्तिको साथ धम्की दिनुभएको छैन। तथापि, तपाईंको मकान मालिकले तपाईंलाई राम्रोसँग घोषणा गर्न सक्छ यदि तपाईं एक महिना भन्दा बढीका लागि एक भन्दा बढी मासिक भाँडाको साथ ढिलाइमा हुनुहुन्छ। यस अवस्थामा, तपाईंको मालिकको मालिकले सांविधिक सूचना अवधिको अनुपालन गर्नुपर्छ, जुन सामान्यतया तीन महिना हुन्छ। वर्थ जान्नु: यदि तपाईले सधैँ आफ्नो भाडामा एक समयमै ट्राफिक रूपान्तरण गर्न सक्नुहुनेछ भने, तपाईंको भाडा को समाप्त हुन सक्छ। तथापि, तपाईंको मालिकको मालिकसँग मात्र दायाँ छ भने, यदि उसले पहिले नै लेखेकोमा तपाईंलाई चेतावनी दिएको छ।
यदि तपाईं भाडामा दुई महिनाको भाडामा हुनुहुन्छ भने, यो तपाईंको लागि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ
यदि तपाईं पट्टे देनदारको रूपमा दुई महिनाको भाडाको रूपमा पूर्वनिर्धारित हुनुहुन्छ भने, तपाईंको मकान मालिकले बिना सूचना समाप्त गर्न सक्दछ। बिना सूचना समाप्ति पनि सम्भव छ यदि तपाइँ मात्र अपूर्ण रुपमा भाडा तिर्नुहोस् र दुई निरन्तर भुक्तानी मितिहरूमा एक पूर्ण मासिक भाडा भन्दा बढी पूर्वनिर्धारितमा हुनुहुन्छ। तपाईले सधै भुक्तानीमा विलम्बको लागि व्यक्तिगत कारणहरू याद गर्नुपर्छ जस्तै अचानक बेरोजगारी, आदि, अन्त्य असफलता प्रदान गर्न सक्दैन। केवल असाधारण अवस्थाहरूमा, उदाहरणका लागि, यदि तपाईं अस्पतालमा बेहोश हुनुहुन्थ्यो र त्यसैले तपाईंको भाडा तिर्न सक्नुहुन्न, अदालतमा एक नजर छ।
त्यसोभए तपाईलाई पट्टेदार देनदारको रूपमा प्रतिक्रिया दिनुपर्छ:
धेरै ढिलाइ नभएसम्म पर्खनुहोस्, तर चाँडै नै तपाईंको ल्यान्डस्वरलाई सम्पर्क गर्नुहोस् जसलाई तपाईंले बुझ्नु भयो कि तपाइँ भाडा तिर्न सक्नुहुन्न वा पूर्णमा छैन। थुप्रै मालिकका मालिकहरूले आफैं कुरा गर्न बोल्छन् र तपाईंलाई एक स्थगित भुक्तानी वा एक किन्ती भुक्तानी पनि दिन्छन्। व्यक्तिगत भाग्यको कारण तपाईं पट्टे वाला देनदार हुनुपर्दछ, उदाहरणका लागि, बेरोजगारी, स्थानीय सामाजिक कल्याण कार्यालयले तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्छ र तपाईंको पट्टेको दायित्वहरू लिन सक्छ।
रद्द रद्द गर्न:
यदि तपाईं, तपाईंको पट्टे देनदारको रूपमा, तपाइँलाई मंजूरी पछि दुई महिनाको अवधि भित्र आफ्नो ऋण सुचारु गर्नुहोस्, समाप्ति अमान्य हुनेछ। यद्यपि, तपाईं यो दुई वर्ष मात्र यो प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाइँले पछिल्लो दुई वर्षको अवधिमा पट्टे लोनरको रूपमा समाप्तिको सूचना प्राप्त गर्नुभयो र पुनरावृत्तमा पट्टि शुल्क तिर्नु भएको छ भने, बन्द रहन्छ।
अर्को लेखpromissory टिप्पणीहरू